5 qalad oo raggu sariirta ku sameeyaan, dumarkuna necebyihiin | Raganimo University
5 qalad oo raggu sariirta ku sameeyaan, dumarkuna necebyihiin
February 12, 20193 minutes
Dumarku cabasho weyn ayay ka keeneen ragga marka sariirta la joogo. Raggu qaladaad badan ayay sameeyaan marka ay u galmoonayaan gacalisadooda. Halkaan waxaan ku soo bandhigaynaa 5 ka mid ah qalalaadka ay dumarku aad uga eed sheegtaan ragga.
Ninka oo hilmaama baashaalka hore
Dumarku ma jecla in lagula deg dego guska. Waxay jecelyihiin in si fiican loo sii baashaaliyo ka hor inta aan galmada dhabta ah aysan bilaabin. Baashaalku waxa uu ka bilowdaa sheekada macaan oo dumarka ku siyaadinaysa rabitaanka galmada. Waxaa ku xiga shumiska, taabaysha, salaaxa jirkeeda oo dhan. Qaybtaan ayay dumarku ku tilmaamaan mida ugu muhiimsan ee galmada. Waxaa la doonayaa in marka aad galmada bilaabaysaan ay gabadha oo dhan hoos ka qoyantahay oo ay sugi la'dahay in aad u galmooto.
Ninka oo hilmaama baahida gabadha
Marka lagu gudo jiro galmada ragga qaar waxay ka fikiraan raaxadooda oo keliya, iyagoo hilmaama baahida gabadha. Waxaa laga yaabaa in uu ninku gabadha ugu galmoodo dhinacyada isaga u raaxo badan oo keliya. Sida in uu dusha uun ka fuulo. Dumarku waxay jecelyihiin ninka raaxadooda niyada ku haya. Ee diyaar u ah in uu qanciyo. Waxaad ku qancin kartaa in aad dhagaysato iyada, dhawaqa ka baxaya. In aad dhinacyada badalato. In aad u leefto haddii ay jeceshahay arintaas. Waa in ay qorshaha kuugu jidho in ay gacalisadaada ay biyo baxdo. Waa in arintaas aad u aragtaa guul aad gaadhay.
Ninka oo degdeg u biyo-baxa
Ragg badan ayaa dhibaato ku qaba in ay biyo baxaan waqti hore. Tani waa caadi oo raggu waa u badanyahay balse waxaa lagu maareyn karaa in inta lagu gudo jiro galmada aad nasiino qaadato. In aad tusaale marka aad biyo-baxa ku dhowdahay aad ku laabato baashaalka hore. Oo aad inta kala baxdo aad samayso waxyaabo kale. Haddii aad tahay nin awooda in uu dhowr jeer biyo-baxo waa caadi oo intaad biyo baxdo ayaad hadana hawsha meesheeda ka sii wadi kartaa.
Ninka oo degdeg sariirta isaga taga galmada ka dib
Qaladka ugu weyn ee ay raggu sameeyaan waa in ay isaga tagaan sariirta marka ay biyo-baxaan. Haddii aysan gabadhu wali biyo bixin ama aysan qanacsanayn waa in aad hawsha sii wadaa. Baashaalka hore ayaad soo bilaabi kartaa. Faraha ayaad isticmaali kartaa iwm. Haddii aad labadiinu biyo-baxdeen oo aad qanacsantihiin xitaa sariirta haka tagin. Dumarku waxay jecelyihiin in lala joogo oo ninku laabta uu galiyo. In loo sii sheekeeyo. Dumarku aad ayay uga xumaadaan ninka isla markiiba ka carara sariirta. Oo waxay dareemayaan sida shey la isticmaalay oo aan loo baahneyn.
Ninka oo hilmaama amaanta gabadha
Dumarku waxay jecelyihiin in la amaano. Waxay jecelyihiin in loo sheego in ay quruxbadanyihiin. Waliba marka gabadhu ay qaawantahay oo sariirta saarantahay waxaa lagaa doonayaa in aad amaanta u badiso. In aad jirkeeda amaanto. In aad u sheegto sida aad ula dhacsantahay quruxdeeda iyo raaxada aad dareemayso.